Indlela Yokunqoba Imfazwe Yabaphulaphuli Ngokusebenzisa I-Twitter - Ziqhelise kwi-Semalt
Amashishini amaninzi e-intanethi asebenzisa iindlela zokuthengisa ze-intanethi ezizinzileyo ezibazisa iindwendwe abafuna ukuzifumana. Kwiimeko ezininzi, abantu basebenzisa intengiso ye-intanethi ukwenzela ukuba abathengi babo bafumane i-website yabo kwiindawo ezininzi ezahlukahlukeneyo zehlabathi. Kwezinye iimeko, abantu benza izilungiso ezifunekayo ngendlela abantu abafumana ngayo abathengi babo.
I-Marketing Media (SMM) inceda abantu abaninzi bafumana izithuba ezininzi zokuthengiswa kwabaxhasi. Ngokomzekelo, abantu bangasebenzisa i-Twitter ukwenza abantu beze kwiwebhusayithi. I-Twitter inemiba emininzi eqeshwe ngabaninzi be-webmasters ukuba benze intuthuko ebalulekileyo kwimikhankaso yabo yokuthengisa. Nangona kunjalo, kukho iindlela ezithile ezizodwa apho umntu angasebenzisa ukuphumelela kwi-Twitter. Ezinye zezona zinto ezibalulekileyo ze-Twitter zinikezelwa kule khokhelo nguNik Chaykovskiy, uSemalt uMphathi oyiNtloko kuMphathi weNtengo.
Bandakanya abaphulaphuli abalungileyo. Xa uthumela i-tweet, inokufumana abantu abaninzi kakhulu. Abantu abahlukeneyo bangaphendula okanye bathathe inxaxheba kwintsimi. Kufuneka ufunde ukungahoywa iindwendwe ezingenakuguqula kubaxhasi. Ngale ndlela, unokuphephelela iziganeko apho abantu bechitha ixesha elixabisekileyo banokuzinikezela kumthengi.
Se benzisa impendulo. Ukubuyisa i-Retweeting yindlela yokuncedisa i-webmasters eyenza i-SEO. Ii-Retweets zisebenza nje ngezithuba zeendwendwe kwaye zinakho ukwenza ukuhanjiswa kwejusi yekhonkco..Nangona kunjalo, kufuneka uqaphele xa uhamba nge-retweeting. Ngamanye amaxesha, kungadinga indima ebalulekileyo yokuphawula ngaphambi kokuthumela i-retweet.
Sebenzisa iividiyo kunye nomxholo wesithombe. Imifanekiso, imifanekiso kunye nemixholo yevidiyo ibalwa njengomxholo wokuthengisa. Injini ye-bhendi yokukhangela ingabonakalisa le mxholo ukwenza enye yeendlela ezifanelekileyo zokuthengisa. Kwezinye iimeko, abantu banako ukufumana iindlela zokudala zokuvakalisa izimvo ngendlela engabandakanyi amagama amaninzi, anokuthintela ingqalelo kwintetho yesivakalisi.
Sebenzisa i-meta tags kwiwebhusayithi. Uphando lwemigqaliselo yophando luyimiba ebalulekileyo yocwaningo lwe-webmaster. Wonke umsebenzi we-SEO uqala ngegama elaneleyo lophando. Ngenxa yoko, yonke i-webmaster kufuneka yenze uphando olungundoqo lwamagama olwaneleyo kuwo wonke umntu. Kwezinye iimeko, abantu kufuneka bavelise iindlela ezininzi zokufumana iingcaciso zabo kwi-index ye-Twitter yeconsole yokukhangela.
Yazi abalandeli bakho bokwenene. Xa wenza nayiphi na intengiso ye-intanethi, kufuneka wenze imiba eyahlukileyo yophuhliso lwewebhu isebenza ngokusesikweni kwiinjini zokukhangela . Kwezinye iimeko, abantu basebenzisa amandla ekuthengiseni i-intanethi xa benza ishishini labo lifikelela kwamanye amanqanaba omashishini. Kwi-Twitter, kufuneka ufunde ukukwazi ukubandakanya abantu abalungileyo. Sebenzisa ixesha lakho kubaxumi kuphela.
Amaninzi amashishini aphumelela kwizicwangciso zabo zokuthengisa ngokusebenzisa i-e-commerce website. I-intanethi inamathuba amaninzi kubantu abahlukileyo ukudala umxholo ofikeleleke kubantu ngabanye nakwi-webmasters. Amafayile amakhulu anamacebo athengisayo okuthengisa amajelo ezentlalo ezenza izigidi zabaxhasi ngamnye ngonyaka. Ezinye zeendlela ongasebenzisa ngayo i-Twitter ukuvelisa izithuthi kwiwebhusayithi yakho zikho kule khokelo. Uyakwazi ukwenza imisebenzi emininzi njengento yokuthengisa ngokujoliswe kuyo kunye nokuzikhethela.